5 maapplication kutora manotsi pane yako Mac | Ndinobva mac
5 maapplication kutora manotsi pane yako Mac
Ndine chokwadi chekuti pane kanopfuura kamwe chiitiko, uye sekunge nemashiripiti, zano rakakura rauya mupfungwa. Panguva iyoyo iwe wakabatikana nebasa kana mabasa epamba asi iwe uchiziva kuti iwe unofanirwa kududzira iro zano kumwe kunhu kana zvimwe, zvingangowira mukukanganwa. Neraki, kune izvi, zvikumbiro zvekutora zvinyorwa zvakabuda, zvishandiso zvinotibvumidza isu nyora uye chengetedza iwo mazano, uye zvakare chengeta iwo muchienderana pakati pemidziyo yedu yese.
Ehezve, sekufamba kwenguva izvi zvinoshandiswa zvakashanduka kusanganisa nhamba hombe yezvinhu zvitsva nemabasa anovapa iyo zvinonyanya kubatsira pane kunyora manotsi. Nhasi ndinokuratidza zvimwe zvacho, asi chokwadi ndechekuti kana iwe ukatarisa muMac App Store, uchaona kuti kupihwa kwacho kwakapamhamha, uye kunenge kwese kuravira.
1 Apple manotsi
4 Mashoko omumhepo
Ini ndichatanga nechiri pachena kwazvo chishandiso icho vese vashandisi veiyo yakarumwa apple vane, Apple manotsi. Zvikonzero zvacho zvakasiyana, asi ini ndaizozvipfupisa mumatatu:
Es iyo yekuzvarwa app iyo yatinayo paMac yedu uye pane edu ese Apple zvishandiso, izvo zvinotitadzisa isu kushandisa mamwe ekushandisa.
Inodaidzwa kuti maNotes uye ndeyekutora zvinyorwa, ndokuti, inoshanda zvazviri uye izvozvo zvinotitadzisa kutsauswa nezvimwe zvinhu.
Zviri chaizvo Nyore kushandisa uye syncs musono.
Nekudaro, kana isu tiri kutaura zvine mutsindo nezve kutora chiziviso, ndiko kuti, kunyora pasi zano, bhuku kana bhaisikopo rakakurudzirwa, runyorwa rudiki rwemabasa, iyo Apple Notes app yeMac inoramba iri chandinofarira chishandiso chayo. Uye zvechokwadi, zvakare pane iyo iPhone uye iPad.
Chirongwa notibhuku yakaunzwa, chaizvo, senzira yakanakisa kune Evernote ye iPhone nePadad apo Nzou yakafunga kudzikisa mashandisiro emidziyo mumaakaundi avo emahara. Zvino chete gadzira iyo Mac, izvo chete zvaive zvichishayikwa kuti uchengetedze manotsi akawiriraniswa, ikozvino hongu, pakati pemidziyo yese.
Kana chaunoda chiri icho notibhuku kana notibhuku fomati, so notibhuku Iwe uchachifarira. Mutsamba imwechete iwe unogona wedzera manotsi ezwi, mifananidzo, zvinyorwa ... Iwe unogona zvakare kuronga zvinyorwa zvako sezvaunoda, gadzirisa zvinyorwa, vadzivirire ne password uye Bata ID uyezve, ndizvo inoenderana neTouch Bar yeMacBook Pros nyowani.
Kumusoro, notibhuku Anwendung kunyora manotsi dzakasununguka zvachose, inowanikwa yeMac, iPhone uye iPad.
Notebook - Tora Zvinyorwa, Syncvakasununguka
Ehezve, kana iwe uchida mhinduro-yekutora mhinduro inoenda kupfuura izvo zviri pakati nepakati zvinoda mushandisi, Evernote ndiyo sarudzo izere kwazvo iripoEhe, mushure mekunyoreswa, sezvo yako yemahara chirongwa ichiganhurirwa kune maviri chete majaira.
Asi Evernote ine isina kufananidzwa mumapoka uye yekumaka system, uye a injini yekutsvaga ine simba kwazvo iyo inokutendera kuti utsvage kunyangwe mune zvinyorwa zvinowanikwa mumifananidzo, pakati pezvimwe zvakawanda zvakanaka zvakanangana nekushandisa kwehunyanzvi.
Mashoko omumhepo iri "yakapusa asi ine simba" kunyorera-kutora kunyorera paMac yako. Kubva pamenu bar pacharo iwe unozokwanisa «kunyora pasi chero chinhu, kubva pane yakapfava kadhi kuenda kune refu chinyorwa», sezvo isina muganho, uye unogona kusarudza font yekushandisa. Iyo inokurumidza, inonzwisisika uye yakapusa kwazvo app, kutora zvinyorwa uye hapana chimwe chinhu. Padivi rakashata, tinoona kuti inoenderana vhezheni yeIOS haisati yabuda, saka hauchazokwanisa kuva, kana uchiida, manotsi ako akawiriraniswa.
Chimwe chikumbiro kutora manotsi pane yako Mac, uye zvimwe zvakawanda. Iyi ndiyo chaiyo Evernote-dhizaini sevhisi, kupi zvirimo zvakarongeka mumabhuku ekunyorera, mabhuku ezvinyorwa muzvikamu, uye zvikamu mumashiti kwaunonyora zvinyorwa zvako kune izvo iwe unogona kuwedzera zvinyorwa, zvinongedzo, mifananidzo, manotsi ezwi, nezvimwe..
Iti avo vane basa Outline kuti chimiro chayo chakafanana nenzira inoonekwa nemuti, nehunde, matavi nemashizha.
Icho chinyorwa chine simba kwazvo uye chinoshanda kutora app, iine kuyanana pakati pemidziyo, asi hapana chakachipa. Mutengo waro weMac i € 39,99, nepo iPhone neIpad zvinoda € 4,99
Mutsara: Ruzivo Ruzivo39,99 €
Kune mamwezve maapplication kutora manotsi paMac senge Notability, Microsoft OneNote ... Ndeipi yaunoshandisa uye nei uchifunga kuti ndiyo yakanakisa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » 5 maapplication kutora manotsi pane yako Mac
Foxconn naApple vanofunga kuvhura chirimwa muUnited States
Dzivisa otomatiki kutanga kana uchisimudza iyo skrini paMacBook Pro 2016